Dutchtown CID မော်ကွန်းတိုက်• Dutchtown CID
အကြောင်းအရာများ Dutchtown CID
Dutchtown နွေရာသီ Vibes
အပေါ် Posted မေလ 15th, 2021
ပေါ် Share Facebook က
အပေါ် Tweet လုပ်ပါ တွစ်တာ
ရက်စွဲကို Save! ကျွန်တော်တို့ကို Downtown Dutchtown မှာဆက်သွယ်ပါ စနေနေ့, ဇွန်လ 5th ဘို့ Dutchtown နွေရာသီ Vibes, ရပ်ကွက်အတွင်းပွဲတော်နှင့်အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ရပ်! Dutchtown Summer Vibes ကိုတင်ပြသည် ခရော -Butz အာမခံ.
ကျန်တဲ့“ Dutchtown Summer Vibes "ကိုဖတ်ပါ။
အောက်မှာ Filed DT2 . အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ . DT2, ဒိန်းမတ်, Dutchtown CIDနှင့် Dutchtown ဖြစ်ရပ်များ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ .
ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဇွန်လ 2nd, 2021 .
Dutchtown CID 2020 နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ
အပေါ် Posted ဇန်နဝါရီလ 19th, 2021
နယ်သာလန်နိုင်ငံအသိုင်းအဝိုင်းတိုးတက်မှုခရိုင်က၎င်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် 2020 နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ။ ဤအစီရင်ခံစာသည် ၂၀၂၀၊ ဇွန် ၃၀ ရက်ကုန်ဆုံးသည့် ၁၂ လကြာကာလကိုဖော်ပြသည်။
ကျန်တဲ့“ Dutchtown CID 2020 နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ "ကိုဖတ်ပါ
အောက်မှာ Filed ဒိန်းမတ် . အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ . DT2, ဒိန်းမတ်, Dutchtown CIDနှင့် UrbanMain. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ .
ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဇန်နဝါရီလ 19th, 2021 .
Dutchtown Business Showcase Juanita's Creole Soul
အပေါ် Posted ဇန်နဝါရီလ 6th, 2021
Dutchtown Business Showcase သို့ပြန်လာပါ။ ဒီဗီဒီယိုစီးရီးထဲမှာ၊ Dutchtown တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယဇာတ်လမ်းတွဲမှကျွန်တော်တို့ကိုကြာပါသည် Juanita's Creole Soul Caféကျနော်တို့စားဖိုမှူး Curtis McCann တွေ့ဆုံရန်ရှိရာ။
ကျန်တဲ့“ The Dutchtown Business Showcase: Juanita's Creole Soul "ကိုဖတ်ပါ။
အောက်မှာ Filed စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား . အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ . စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား, DT2, ဒိန်းမတ်, Dutchtown စီးပွားရေး Showcaseနှင့် Dutchtown CID. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ .
ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဇန်နဝါရီလ 6th, 2021 .
အပေါ် Posted အောက်တိုဘာလ 29th, 2020
နို ၀ င်ဘာလမှ စ၍ အိမ်နီးချင်းများကို Dutchtown တွင်လူထု ဦး ဆောင်မှုတိုးတက်စေရေးအတွက်ကော်မတီပုံစံအသစ်အောက်တွင်အတူတကွလက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားမည်။ ဤကော်မတီများသည်တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်အစည်းအဝေးများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီးကော်မတီတစ်ခုစီသည်နယ်ပယ် ၅ ခုအနက်တစ်ခုကိုအာရုံစိုက်မည်ဖြစ်သည်။
ကျန်တဲ့“ Dutchtown ကော်မတီနှင့်ဆက်သွယ်ပါ” ကိုဖတ်ပါ။
အောက်မှာ Filed DT2 . အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ . DT2, ဒိန်းမတ်, Dutchtown CID, အစည်းအဝေးတွေ, UrbanMainနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ .
ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် အောက်တိုဘာလ 29th, 2020 .
10-10-1000: Dutchtown CID ဖြင့်စက်ရုံလာပါ
အပေါ် Posted အောက်တိုဘာလ 3rd, 2020
အဆိုပါ join Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင် Dutchtown တစ်လျှောက်တွင် tulip နှင့် daffodil မီးသီး ၁၀၀၀ ကိုစိုက်ပျိုးရန် ၁၀/၁၀ တွင်။
ကျန်တဲ့ ၁၀-၁၀-၁၁၀၀၀ - Dutchtown CID ဖြင့်စက်ရုံလာပါ
အောက်မှာ Filed Dutchtown CID . အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ . ဒိန်းမတ်, Dutchtown CID, Marquette ပန်းခြံနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ .
ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် အောက်တိုဘာလ 3rd, 2020 .
CID သတင်း (5)
Dutchtown စီးပွားရေး Showcase (1)
Dutchtown CID (15)
Dutchtown ဖြစ်ရပ်များ (6)
Dutchtown ဖြစ်ရပ်များ (1)
Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်း (2)
Marquette ပန်းခြံ (3)
သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာ (1)
ဒိန်းမတ် Dutchtown CID
DT2 • Downtown Dutchtown
အဂၤလိပ္ (English) • စပိန် (Spanish) • TiếngViệt (Vietnamese) • العربية (Arabic) • বাংলা (Bengali) • Bosanski (Bosnian) • 简体中文 (Chinese) • français (French) • ဗမာစာ (Burmese) • नेपाली (Nepali) • Afsoomaali (Somali)
© 2016–2021 DutchtownSTL နှင့် Downtown Dutchtown ©။ DutchtownSTL.org ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူသည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ နှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခွအေန။ DutchtownSTL.org သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။
Dutchtown CID ကိုရှာပါ
Dutchtown CID အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်စာရင်းထွက်စစ်ဆေးပါ ရပ်ကွက်အရင်းအမြစ်များ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်များနှင့်အတူ
ရဲ - ဘယ်သူ့ကို၊ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အချိန်မှာဖုန်းဆက်မည်နည်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှု Dutchtown အတွက်နေရာများ၏လမ်းညွှန် စားသောက်ဆိုင်များ၊ အရက်ဆိုင်များ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်!
အိမ်ခြံမြေပညာရှင်များနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေပါ Dutchtown တွင်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်း.
ကူညီပါ amp Marquette ပန်းခြံကိုပြန်လည်သက်ဝင်!